यी हुन् धनी बन्ने ७ सूत्र - Sabal Post
२५ आश्विन २०७५, बिहीबार ०५:५९ Posted By: Admin
धनी बन्ने रहर सबैलाई हुन्छ । तर, केही व्यक्तिले मात्र आफ्नो त्यो रहर पूरा गर्न सक्छन् । तीमध्येका एक हुन्, भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी । मिहिनेत र लगनशीलताका कारण उनी भारतमा प्रेरणाको स्रोत नै बन्न पुगे । उनी कसरी धनी भए त ? जानौंँ :
१ पैसाको पछि दौडिँदैनन्
मुकेश आफ्नो बुबालाई गुरु मान्छन् । पैसाको पछाडि दौडिँदैमा सफल व्यवसायी बन्न सकिँदैन भन्ने धारणा उनी राख्छन् ।
२ठूलो सपना देख्छन्
ठूलो व्यवसायी बन्न ठूलै सपना देख्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । उनी ठूलो सपना देख्छन् र पूरा नभएसम्म आरामले निदाउनसमेत सक्दैनन् ।
३सोखका लागि पर्याप्त खर्च गर्छन्
उनी व्यवसायमा मात्रै होइन, आफ्नो सोखका लागि पनि पर्याप्त खर्च गर्छन् । उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको टिम मुम्बईका मालिक पनि हुन् ।
४आफैँलाई विश्वास गर्छन्
उनी आफैँलाई विश्वास गर्छन् र हरेक परिस्थितिका लागि तयार हुन्छन् । उनले जीवनमा थुप्रै समस्या झेलेका छन् । त्यसैले कामको कुरा आएपछि आफ्नै अनुभवलाई सम्झन्छन् ।
उनी आफूलाई साहसी व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्छन् । हरेक चुनौतीको सामना गर्न तयार हुन्छन् ।
दौडको बीचमा आराम गर्नेहरूलाई सफलता प्राप्त हुँदैन भन्ने उनको मान्यता छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा कसैले कसैलाई नपर्खने भएकाले सफलताका लागि आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
७बजारको माग बुझ्छन्
व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि पहिला बजारको माग बुझ्न जरुरी पर्छ । यदि उत्पादन राम्रो भए पनि बजार छैन भने त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम नल्याउन सक्छ । समयको माग र आवश्यकताअनुसार उनी अगाडि बढ्छन् ।नयाँ पत्रीकाबाट
सुजुकीको अफरः गुड्दै नगुड्ने बाइक तथा स्कुटरसँग नयाँ साट्न सकिने
भिसा सेन्टरमा कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने कतारको भनाई
शंकरदेव ने बि संध का पुर्व नेता कोईराला जी पी कोईराला फ़ाउन्डेशन अमेरिका शाखा को केन्दिय सदस्य नियुक्त
नयाँ वर्षका दिन मात्र फुल्ने अनौठो फुल !
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता : नेपाल आर्मी च्याम्पियन बन्न सफल
जोशी, सिंघानिया र गौतम नागरिक नायक
अन्तर्राष्ट्रिय करांतेमा मिसन गोजुरीयोको ईतिहांस कायम